क्रुर शासक विरुद्ध जिउँदा जनताको लडाइँ – मझेरी डट कम
कुरा हो, कथा हो २०५९ साल फागुन ९ गतेको । यस कथा व्यथामा विर्सनै नसकिने राम्रा नराम्रा प्रवृत्तिका पात्रहरू हुन्- दुःख सुखका खूल्ला दिलका क्षणिक सहयात्री क. असर्फी सदा जो अन्तरिम कालमा सभासद पनि भए, आशाराम चौधरी जसकोे हृदयमा पंक्तिकारले विशाल आकाश देखेको थियो, त्यो प्रेमपूर्ण मन र सहयोगी हातहरूलाई यो पंक्तिकार सलाम गर्दछ । उत्तम रुपाखेती (मेजर) जसको नेतृत्वमा यस पंक्तिकारले मृत्युसँग नजिकैबाट साक्षात्कार गर्ने मौका पायो । अर्का त्यस्ता महापुरुष जसको कृपा यस पात्रमा नहुँदो हो त यी शब्दहरू कदापि कतै पढ्न पाइन्नथ्यो, तत्कालीन एस. पी. नवीन अधिकारी । यस्ता पुरुषहरूको सल्लाह र सद्भाव अनुरुप विशेष गरेर आजका युवावर्ग हिँड्ने हो भने नयाँ नेपालको निर्माणका लागि दशकौँ दशक कुर्नु पर्दैन्थ्यो । ती सन्दर्भहरू कुनै समयमा अर्कै ठाउँ र परिवेसमा केलाउँने बाचा गर्दै यस पटक भने थोरै प्रसँग किसन पात्रका रुपमा अघि सारिएको छ । ….. भयावह समय तेर्सिएको हुन्छ । जताततै मुखौले कानूनले जरा गाडेको हुन्छ । बोल्न र भन्न पाइन्न । सुन्नु मात्र पर्छ । सुन्दासुन्दा कान पाक्छन् । जुन प्रश्न सोधिन्छ त्यसकै मात्र सटिक जवाफ पस्कनुपर्छ । राणाकालीन शैली, निरंकुशताको पराकाष्ठा जताततै व्याप्त हुन्छ । मनभरि कुराहरू गुमस्याएर र भित्रभित्रै कुड्याएर धर्तीमा पाइला टेक्नुको विकल्प हुन्न । मानौं जनताहरू धर्तीमा उत्पन्न भएका गुहेकीरा हुन् र मुखौले कानुनका निर्माता एवं संरक्षकहरू चाहिँ कथित स्वर्गबाट इन्द्रका आदेशले खटिएका देवदूत हुन् ।
उसको लामो कथनपछि मेजर तीन छक्क पर्छन् । चुपचाप रहन्छन् । किसनले पनि आफ्ना कुरा माथि परेको अनुभव गर्र्छे र पुनः मुख खोल्छ-“तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ । तपाईँ सरकारी धन बेक्कारमा नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ । मलाई यो सरकारी गाडीमा बसाएर यात्रा गराइरहनुको कुनै औचित्य छैन । मेरो बारेमा भएको भ्रम पनि हटाउँनुस् र मलाई आफ्नै सार्वजनिक जीवन बिताउन दिनुस् । म अर्थोक….।” उसका कुरा टुङ्गिन नपाउदै मेजरले गाडी किनारामा अड्याए र कुर्लन थाल्छन्, “ए तपाईँ मात्र विद्वान् । मलाई मूर्ख नै सम्झनु भएको । याद गर्नुस्- म मूर्ख हैन । मूर्ख त तपाईँहरू जस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ । २०, २२ जना विद्वान् शिक्षक, शिक्षिकाहरू मध्ये तपाईँलाई चुनेर ल्याउँनु मेरो रहर हो ? तपाईँलाई यो १६ लाखको सरकारी गाडीमा शहरको सैर गराउँदा मलाई व्यक्तिगत के लाभ हुन्छ ? म मेरो ड्युटी गरिरहेछु । मेरो ड्युटीमा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिका लागि एक गोली नै काफी छ । यस्ता एक गोलीका शिकार हुनेहरू धेरै छन् । तपाईँलाई पनि तिनकै पंक्तिमा उभिने मन छ भने त ठीकै छ । नत्र झुटको खेती गरेर मलाई अन्धकारमा नराख्नुस् । हैन, उज्यालोको खेती गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सत्य बक्नबाट टाढा नरहनुस् । सम्झनुस्, सुकरातले सत्य बकेर र सत्यकै लागि हेमलेट नामक विष पियर मृत्यु वरण गरेका थिए । त्यसैले पो उनको नाम संसारले लिइराखेको छ । विद्वान् भएर पनि मूर्खता प्रर्दशन गर्दै सबै नेपालीलाई भ्रममा नपार्नुस् ।”